स्लाईड दृश्य - अनुकूलन एनिमेसनरोज्नुहोस्
रेखाचित्र उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्
एनिमेसन सूचीले सबै एनिमेसनहरू हालको स्लाईडका लागि प्रदर्शन गर्दछ.
प्रत्येक स्लाईड सँग एउटा मूख्य एनिमेसन छ जुन स्लाईड देखाइएको बेला चालु हुन्छ ।
बढी एनिमेसनहरू उपस्थित हुन सक्छ, जुन आकार देखाइएको बेला चालु हुन्छ । यदि यी मध्येका कुनै पनि एनिमेसन गरिएको आकारहरू उपस्थित भयो भने, तिनीहरू एनिमेसन सूचीको तल्लो आधामा सूची हुन्छ । ट्याबहरूले प्रत्येक आकारको नाम प्रदर्शन गर्दछ जसले एनिमेसन चालु गर्दछ ।
एनिमेसन सूचीबाट चयन एनिमेसन प्रभावहरू हटाउनुहोस्
अर्डर परिवर्तन गर्नुहोस्
सूचीमा बटनहरू मध्ये एउटा क्लिक गर्नुहोस् चयन एनिमेसन प्रभाव माथि वा तल लैजानका लागि.
क्लिक गर्नुहोस् - अर्को माउसको क्लिक नगरेसम्म यो प्रभावमा एनिमेसन रोक्दछ ।
अघिल्लो सँग - एनिमेसन तुरुन्त चलाउदछ ।
अघिल्लो पछि - अघिल्लो एनिमेसन समाप्त हुने बित्तिकै एनिमेसन चलाउदछ ।
एनिमेसनको थप गुणहरू चयन गर्नुहोस् । क्लिक गर्नुहोस् ... बटन प्रभाव विकल्प संवाद खोल्नका लागि, जहाँ तपाईँ गुणहरू चयन गरेर लागू गर्न सक्नुहुन्छ
पूर्वदृश्य नयाँ वा सम्पादित प्रभावहरू स्लाईडमा चयन गर्नुहोस् जब तपाईँले तिनीहरूलाई प्रदान गर्नुहुन्छ
पूर्वदृश्यमा चयन एनिमेसन प्रभाव प्ले गर्नुहोस्